Boqorka Sacuudiga oo dhawaan xilka ku wareejinaya Wiilkiisa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Boqorka Sacuudiga oo dhawaan xilka ku wareejinaya Wiilkiisa
Boqorka Sacuudiga oo dhawaan xilka ku wareejinaya Wiilkiisa
Riyadh-(SONNA)-Jariiradda Daily Mail ayaa daabacday in Boqorka Dalka Sacudiga, Boqor Salmaan Bin C/casiis Al-Sa’ud uu xilka ku wareejinayo wiilkiisa 32 jirka ah ee Amiir Maxamed bin Salmaam.
Hadalkan oo ay Jariiraddu kasoo xigatay Qof ku dhow qoyska reer Boqor ayaa intaa ku daraya in Todobaadka soo socdo laga yaabo inuu talada Dalka si buuxda ula wareego Amiir Maxamed haddii aysan arrintu is beddelin.
Boqor Salmaan ayaa la sheegay inuu noqon doono shaqsi sharafeed maamula oo keliya Xaramaynka, balse awoodda kale uu u gacan gelin doono wiilkiisa, kaasoo haatanba saamayn weyn ku talada Waddanka Sacuudiga.
Amiir Maxamed oo lagu naaneyso MBS ayaa in dhowaalaba u gogol xaaranayay la wareegidda maamulka Dalka, markii uu xabsiga dhigay wasiirro,Amiirro iyo Rag magac ku leh Dalka Sacuudi Carabiya, isagoo ku eedeeyay musuqmaasuq baahsan.
Xigasho: Daily Mail
Previous articleWasaaradda Amniga XFS oo digniin ka soo saartay falalka lidiga ku ah amniga
Next articleSoomaaliland oo ka digtay rabshado salka ku haya doorashooyinka